Ukuqhekeka kweMigodi ye-Crypto: I-Abkhazia ivala iifama ezisibhozo zemigodi
Abasemagunyeni kwiriphabliki eyaziwayo eSouth Caucasus, e-Abkhazia, bachonge kwaye bavale iifama ezisibhozo zemigodi ye-crypto kwezi veki zimbini zidlulileyo. Oku kubambeka kubandakanye izixhobo zemigodi ezisebenza ekwaphuleni umthetho wokuvalwa kwelizwe kwimigodi ye-cryptocurrency.
Ngokwengxelo esemthethweni kwiwebhusayithi yoMphathiswa Wezangaphakathi, abasemagunyeni base-Abkhazian banqamle ngaphezulu kweeyunithi ezingama-350 zehardware yezemigodi ye-crypto kwigridi yelizwe.
Icandelo loMphathiswa Wezangaphakathi linoxanduva lokuzingela iifama zemigodi ezenziwa ngokungekho semthethweni kwimimandla eliqela kwiriphabliki yaseMzantsi Caucasian. Abasemagunyeni bafumana iifama ezintathu zemigodi ngokungekho mthethweni kwidolophu elikomkhulu, iSukhumi, apho kwavalwa khona iirigs ezili-17 kunye nezohlwayo zolawulo zanikwa abanini.
Abasemagunyeni bafumana ezinye izibonelelo ezintathu zemigodi kwiSithili saseGudauta, apho iirigs zemigodi eziyi-128 zacinywayo.
Ngeli xesha, abasemagunyeni bafumana eyona fama inkulu ingekho mthethweni kwiSithili saseGali, apho kwakusebenza khona iirigs ezili-184. Inkampani yokuhambisa umbane yaqaphela ukuba le fama yemigodi itya malunga neekhilowathi ezingama-170 zombane. Abasemagunyeni bahlawulisa iiruble ezingama-408,000 zaseRashiya (iidola ezingama-5,660 XNUMX) kwabo basebenza kwaye bayicima ngokukhawuleza ifemu kwigridi.
Ngexesha lovavanyo olwenziwe kwiSithili seGagra, abasemagunyeni bavumbulula ezinye izixhobo zembiwa ze-17 ze-crypto, eziqikelelwa ukuba zisebenzise malunga ne-28.5 kilowatts yamandla. Njengoko bekulindelwe, ezi rigs zavalwa kwaye zatywinwa.
AbaGwenxa beMigodi ye-Crypto banokujongana nexesha leJele
Icandelo loMphathiswa Wezangaphakathi e-Abkhazia liqhuba uhlolo mihla le ukuze kuchongwe izibonelelo zemigodi ezichaseneyo nemigaqo emitsha yelizwe.
Kwiinyanga ezithile emva, urhulumente waseSukhumi wandise isithintelo sethutyana kwimigodi ye-cryptocurrency esixekweni ukuya kweyoKwindla ngo-2022. Iinkampani ezibanjwe ngokungekho mthethweni zisebenzisa amandla ombane kwimigodi ye-crypto zinokuhlawuliswa imali eninzi okanye zikhonze kwizigwebo zasejele.
Umbuso waseRussia oxhaswe ngurhulumente ufezekise ezi zithintelo kwimisebenzi yemigodi ye-crypto kwi-2018, kulandela ingxaki yamandla kwisizwe.
tags Abkhazia, Imigodi ye-Crypto-Mining, Cryptocurrency, iindaba
Ukupheliswa kweMigodi yeBitcoin eTshayina Kufikelela kwiPhondo laseYunnan
Ukuhlaziywa: 14 Juni 2021
Elinye iphondo e-China lithathe indawo ngokuchasene nokusebenza kwemigodi yeBitcoin kule ngingqi njengoko urhulumente wase-China eqinisa iinzame zokuphelisa ilizwe kwimisebenzi ye-cryptocurrency. Ngempelaveki, abaphathi bephondo baseYunnan bakhuphe imemo iyalela ukuba kwenziwe uphando ngokusetyenziswa ngokungekho mthethweni kombane ngabantu kunye neenkampani kwimigodi yeBitcoin.
I-China Securities Journal, indlu yeendaba yasekuhlaleni, ixele ukuba isebe lezamandla ephondweni lisongele ngokunciphisa ukuhanjiswa kwamandla kwabo basebenzisa umbane kwimigodi ye-crypto.
ISouth China Morning Post (i-SCMP) ixele ukuba abasemagunyeni kwiphondo banokuvala nayiphi na imisebenzi yezemigodi yeBitcoin “Beka umngcipheko wokhuseleko olunxulumene nokusetyenziswa kombane” Ekupheleni kukaJuni.
I-Yunnan, iphondo lesine ngobukhulu e-China ngokwe-Bitcoin hashing power, ijoyine uluhlu olukhulayo lwengingqi zase-China ezibambelela kwimisebenzi yezemigodi ye-BTC. Abanye abaye babambelela kwimigodi ye-BTC kubandakanya iMongolia, iXinjiang, kunye neQinghai.
IYunnan ikwangumvelisi wesibini ngobukhulu wamandla ombane e-China emva kweSichuan, kwaye uninzi lwezimbiwa kulo mmandla sele zisebenzisa amandla ahlaziyekayo. Nokuba ithini, iBeijing iyaqhubeka nokwenza umlo kwimisebenzi enxulumene ne-cryptocurrency.
Umsebenzi wezimbiwa zeBitcoin kulo lonke elase China uye wehla kancinci kwezi nyanga zidlulileyo. Ngaphakathi iMongolia yaqala ukugxotha abasebenzi basezimayini ngeyoMdumba kulo nyaka kwaye yayisele ivalile iifama ezingama-35 zemigodi ngasekupheleni kuka-Epreli.
Okwangoku, abasemagunyeni eQinghai bayalele abasebenzi basezimayini be-BTC ukuba bavale ivenkile kwiveki ephelileyo kwaye bayalele amashishini afana namaziko edatha, iipaki zeshishini, kunye nezikhululo zamandla ukuba ziyeke ukubonelela ngezixhobo kwiinkampani ezinxulumene ne-crypto.
I-China ilahlekelwa yi-Bitcoin Mining Dominance
Ngokwe-Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (i-CBECI), i-China isenoxanduva malunga ne-65% yexabiso le-hash yehlabathi. IXinjiang ngoyena mboneleli mkhulu wamandla okombiwa kweBitcoin kunye neeakhawunti malunga neepesenti ezingama-36 zenqanaba le-hash yehlabathi, elandelwa yiSichuan kunye ne-Inner Mongolia, ngokwahlukeneyo. I-Yunnan iza kwindawo yesine kunye neeakhawunti ze-5.4% yenqanaba le-hash yehlabathi ngokwe-SCMP.
Enye ingxelo evela kwi-Miner Daily icebise ukuba i-China's hashrate dominance yehle yaya kwi-55%, njengoko iinkampani ezininzi zemigodi zifudukela eMntla Melika, apho amandla ahlaziyekayo eyinto eninzi.
Oko kwathethileyo, abanye abahlalutyi baqaphele ukuba ukuwa kwamandla e-hash e-China ngenxa yokuma kuka-Bitcoin kurhulumente, yinto elungileyo yenethiwekhi yeBitcoin.
tags Bitcoin Mining, iTshayina, Cryptocurrency, iindaba, Yunnan
I-Iran yezoQoqosho kwi-Booms njenge-blockchain Adoption Sebenzisa iSonyusa
Ukuhlaziywa: 7 Juni 2021
Ngokuka-Mphathiswa Wezemicimbi yezoqoqosho nezeMali e-Iran, u-Farhad Dejpasand, ilizwe liyasondela ekufezekiseni iinjongo zalo zerhafu. Umphathiswa uqaphele ukuba ukwamkelwa kwetekhnoloji entsha, njenge-blockchain, kuyincedile i-Iran ukuba ikhulise ingeniso yayo kwaye ngoku inika ingxelo yesithathu sokukhula kwengeniso yohlahlo-lwabiwo mali.
UDejpasand uqaphele ukuba:
“IBlockchains izakuthatha ishumi leepesenti lemveliso yelizwe iyonke kule minyaka mine izayo. Njengokuba ukusetyenziswa kombane kunyukile siye [sabeka] umda kwimigodi yeemali ezigcina imali, ngelixa ekuhambeni kwexesha, asinakuma endleleni yophuhliso lwetekhnoloji. ”
Umzi mveliso we-crypto wezemigodi ufumene ukunyuka e-Iran ngenxa yamandla esizwe atshiphu. Oko bekuthethile, urhulumente utyhola ukusetyenziswa ngamandla kweli candelo, kudityaniswa nembalela yalo nyaka, kumbane ongazinzanga obonwe kwizixeko ezininzi zexesha elidlulileyo.
Abasemagunyeni baveze ukuba iilayisensi zemigodi ezinelayisensi nezingekho mthethweni zisebenzisa ngaphezulu kwama-2,300 ee-megawatts mihla le.
Itekhnoloji eNtsha incede iIran yaGxotha iSanctions zase-US
Ethetha kumsitho wokuphehlelelwa kweeprojekthi ezimbini ze-e-commerce, uDejpasand uthethe ngokubaluleka korhwebo lwe-elektroniki kuhlumo lwesizwe loqoqosho. Ngokwe Tehran Times, umphathiswa utyhile ukuba isabelo se-e-yorhwebo kwimveliso yasekhaya eIran (GDP) ikhule malunga namaxesha ama-2.4.
Ngokwe-Iranian E-Commerce Development Centre, intengiselwano yorhwebo kwi-Intanethi ikhule ngezihlanti ezine phakathi kuka-Matshi 20 kunye noSeptemba 21, 2020, kwangelo xesha linye kunyaka ophelileyo.
Okwangoku, iingxelo zibonisa ukuba inani lamaphepha-mvume oshishino akhutshwe kwi-intanethi aphindaphindwe kathathu njengoko amashishini amadala exambulana ukwandisa ukuya kwintengiso esekwe kwiwebhu.
UDejpasand uqaphele ukuba ngokuphumeza obu buchwephesha butsha, i-Iran ikwazile ukuthintela uninzi lwezohlwayo zoqoqosho ezibekwe yi-United States. Itekhnoloji entsha ikwancede isizwe ekusingatheni ngokufanelekileyo ubhubhane we-coronavirus.
Ngelixa i-Iran izuze kakhulu kubuchwephesha obutsha (blockchain) ukusetyenziswa, urhulumente ufuna ukuthintela iintlobo ezininzi zemisebenzi enxulumene ne-crypto e-Iran. Oko kwathethileyo, umzi mveliso we-fintech ulumkisile ukuba izithintelo kwimveliso ye-crypto kunye ne-blockchain inokuthintela amathuba elizwe.
tags block Chain, Cryptocurrency, Iran, iindaba
Ukusebenza kwamachibi eMigodi yeDijithali yemali eChina kulandela ukuBhengezwa kweCrackdown
Iingxelo zibonisa ukuba ngaphezulu kwe- $ 400 yezigidigidi ishiye i cryptocurrency Isithuba kwimpelaveki, yeyiphi eyona nto ibithengiswa kakhulu kwimbali yecrypto.
Iyonke intengiso yeemali zentengiso ejikeleze iinyanga ezininzi eziphantsi kwe- $ 1.47 yezigidigidi kwiseshoni yokuqala yaseAsia ngoMvulo. Ukulungiswa kweemarike kuthumele isiciko seshishini ezantsi malunga neepesenti ezingama-43 ukusukela kwincopho yeedola eziyi-2.55 yezigidigidi kwiiveki ezimbini ezidlulileyo.
Ukuhlala ixesha elide kwe-bearish kubangelwa yi-China kunye nokubhengezwa kwayo ngokuchasene namachibi e-Bitcoin. I-Reuters ixele kwangoko namhlanje ukuba amachibi emigodi ye-crypto iHashCow kunye ne-BTC.TOP imise yonke imisebenzi yayo e-China, njengoko iBeijing iphindaphinde kabini ukubekelwa ecaleni.
Ukuqhekezwa kwamachibi emigodi kubhengezwe ngolwe-Sihlanu odlulileyo yikomiti yeBhunga likaRhulumente ebichotshelwe ngu-Sekela-Nkulumbuso u-Liu He. I-HashCow ibhengeze ukuba izakuyeka ukuthenga ii-rigs ze-Bitcoin, ngelixa i-BTC.TOP ibhengeze ukuba iyayimisa yonke imisebenzi yezemigodi kwilizwe ngokupheleleyo.
Igosa eliyintloko lotyalomali e-Beijing-ese Novem Arcade Technologies, u-Chen Jiahe, uphawule ngalo mbandela esithi:
"Ukumbiwa kwe-Crypto kudla amandla amaninzi, okuphikisana neenjongo ze-China zokungathathi hlangothi."
IHuobi Mall ikhuphe ingxelo ngaphambili kwangoko namhlanje, iqaphela ukuba, ngokukhawuleza, imise iinkonzo zayo zemigodi ye-crypto kubathengi base China.
I-China Ukuphulukana ne-Cryptocurrency Mining Dominance
Ngexesha lokushicilela, iinkampani zemigodi zase-China zinoxanduva malunga ne-60% yamandla e-hash iyonke. Abahlalutyi baqinisekisile ukuba ukwehla kokuthembela e-China kunokuba kuhle kumathemba exesha elide kwishishini le-crypto. Umsunguli we-BTC.TOP, u-Jiang Zhuoer, uqaphele ukuba ekugqibeleni, i-China izakuphulukana namandla e-computing ye-crypto kwamanye amazwe.
Okwangoku, u-Alex Gladstein, iGosa eliyiNtloko leQhinga kwiZiko lamaLungelo oLuntu, uqinisekisile ukuba iNyakatho Melika ingaba yindawo entsha yezemigodi. Oko kwathethi, uninzi lwemisebenzi yezimbiwa yenzeka ngoku eTexas ngenxa yamandla ayo asepokothweni (ahlaziyekayo)
tags Bitcoin, Cryptocurrency, Iphuli yemigodi, iindaba